"Wali Wuu Ina Jecel Yahay, Soo Celiya" - Jamaahiirta Man United Oo Maamulka Kooxdooda U Sheegay Hal Ciyaartoy Oo Ay Usoo Celiyaan. - Gool24.Net
“Wali Wuu Ina Jecel Yahay, Soo Celiya” – Jamaahiirta Man United Oo Maamulka Kooxdooda U Sheegay Hal Ciyaartoy Oo Ay Usoo Celiyaan.
Jamaahiirta kooxda Manchester United ayaa jeclaystay waxa uu baraha bulshada ka sameeyay xiddigii hore ee kooxdooda ee Memphis Depay iyagoo gaadhay xataa heer ay ku dalbadaan in maamulka kooxdooda ay saxeexiisa dib u sameeyaan.
Memphis ayaa kusoo biiray Man United sanadkii 2015 heshiis 30.6 Milyan Pound ku qabsoomay iyadoo loo arkayay mid kamida da’yarta ugu mustaqbalka wanaagsan dunida, Wakhtigaas ayaana loo gacan geliyay maaliyada taariikhiga ah ee No.7.
Si kastaba, Memphis ayaa awoodi waayay inuu sameeyo wixii ay ka filayeen jamaahiirta Manchester isagoo kaliya toddoba gool iyo lix caawimo kusoo sameeyay 53 kulan oo uu matalay.
Depay ayaa Old Trafford ka baxay kaliya 18 bilood kaddib markii uu kusoo biiray iyadoo qiimo ka hooseeya midkii uu ugu soo wareegay lagaga iibiyay Lyon halkaas oo uu markale ku muujiyay waxa uu awoodo iyo tayadiisa.
Si kastaba, Depay ayaa haatan jamaahiirtiisii hore kusoo jiitay arrinta ah inuu baraha bulshada soo dhigay isaga oo xidhan maaliyada kooxdaas xilli uu ciyaar gacmeed ciyaarayo taas oo dhalisay inay codsadaan markale saxeexiisa.
“Isagu wali wuu ina jecel yahay, Soo celiya” Ayuu yidhi mid kamida taageerayaasha barta Twitter-ka adeegsaday si uu maamulka sarre ee kooxdiisa uga codsado inay markale lasoo saxeexdaan Depay.
Taageere labaad ayaa isaguna yidhi xilli uu dareenkiisa cabirayay “Waan jecelahay ninkan”.
“Soo celiya, Rashford, Tony (Martial) iyo Depay saddexleydooda weerar waa mid horumari doonta” Ayuu yidhi taageere kale oo saadaal sameeyay.
“Uma baahnin inaan soo iibsano weeraryahan kale, Sida ugu dhakhsaha badan usoo celiya” Ayuu yidhi mid kale oo kamida mucaashaqiinta United ee sawirkaas ka fal-celiyay.
Waxa xusid mudan in Man United ay heshiiska Depay ku dartay qoddob u ogolaanaya inay dib ula soo saxeexan karto haddiiba ay markale u baahato.